Foxmụ nwanyị Fox - WRSP
Ụmụ nwanyị Fox
ECHICHE NDỊ SISTERS FOX
1813 (Eprel 8): Ann Leah Fox mụrụ na Rockland County, New York.
1833 (October 7): Margaret (Maggie) Fox mụrụ na Consecon, Prince Edward County, Ontario, Canada.
1837 (March 27): Catherine (Kate) Fox mụrụ na Consecon, Prince Edward County, Ontario Canada.
1848: Ezinụlọ Fox si Belleville, Ontario kwaga Hydesville, New York.
1848 (March 31): Kate (iri na abụọ) na Maggie (iri na ise) nụrụ “mkpesa” dị omimi, nke ha kwuru na ọ bụ mmụọ.
1849 (November 14): "Fox Sisters," (Leah, Maggie, na Kate) gosipụtara ngosipụta nke "ikike" ha na-adịghị ahụkebe na Rochester, Halllọ Nzukọ Kọrint nke New York.
1850s: “Ngosiputa ime mmụọ” bịara bụrụ ihe ama ama dịka ndị na-ajụ ase na-agbaso nzọụkwụ Fox Sisters wee gaa na ọgbakọ nkuzi iji nye ngosipụta nke ikike ha.
1851: “Ndị dọkịta Buffalo” nyochara Fox Sisters ahụ, bụ ndị kwupụtara na ha bụ aghụghọ.
1852: Maggie malitere mmekọrịta ya na onye nyocha ya bụ Elisha Kent Kane.
1853: Charles Grafton Page na-enyocha patent nyochachara ụmụnne nwanyị wee chọpụta na ha bụ ndị aghụghọ.
1853: Smụ nwanyị Fox kwagara New York City wee kewaa ụzọ, nke ọ bụla na-arụ ọrụ nke aka ya maka ndị ahịa nkeonwe.
1857: Elisha Kent Kane nwụrụ mgbe ọ na-eme njem, na-ahapụ Maggie.
1858: Lia lụrụ onye ọgaranya dị na Brooklyn, bụ Daniel Underhill.
1862: Ikwu na ha lụrụ na nzuzo, Maggie weghaara aha Kane wee bụrụ Margaret Fox Kane.
1871: Kate gara England.
1872: Kate lụrụ onye ọka iwu Britain HD Jencken wee mụọ ụmụ nwoke abụọ.
1881: Di Kate, HD Jencken, nwụrụ, na Kate na ụmụ ya nwoke laghachiri New York.
1884: Mahadum Pennsylvania nke Seybert Commission gụnyere Maggie Fox Kane na nyocha ha banyere ihe ime mmụọ ma gosipụta mmechuihu na arụmọrụ ya.
1885: Lia bipụtara akụkọ ọdịnala ya, Njikọ Na-adịghị n'Aka nke Ime Mmụọ Ime Oge.
1888 (October 21): Kate na Maggie pụtara na New York Academy of Music iji kwupụta n'ihu ọha na nkwupụta mmụọ ha kwuru na ọ bụ ụgha.
1889: Kate na Maggie kwughachiri nkwupụta ha na akụkọ ahụ abụwo aghụghọ.
1890 (November 1): Leah Fox Underhill nwụrụ na New York City.
1892 (July 3): Kate Fox Jencken nwụrụ na New York City.
1893 (March 8): Maggie Fox Kane nwụrụ na New York City.
Ann Leah Fox Fish Underhill, Margaretta ma ọ bụ Margaret ("Maggie") Fox Kane, na Catherine ma ọ bụ Katherine ("Kate") Fox Jencken (nke a na-akpọkarị "Fox Sisters") bụ ndị a na-ekwuputa ebe niile ibido ije bịara a maara dị ka American Spiritualism nke oge a. Lia, bụ ada nke atọ amụrụ na Rockland County, New York, ebe ụmụnne nwanyị abụọ ndị a mụrụ na Consecon, Prince Edward County, Ontario. Tupu ịkwaga Belleville, Ontario gaa steeti New York na 1848, Fox ezinụlọ kewara oge ya n'etiti United States na Canada (Massicotte 2017: 22-23). Na 1848 (mgbe ndị nọ n'afọ iri na ụma bi na ndị mụrụ ha na Hydesville, New York), Kate na Maggie kwuru na ọ na-anụ ụda ihe omimi ma na-akụ na-ebupụta n'ime ụlọ ha dị mma. Maggie malitere ịkụ aka na ngwangwa ọ malitere ozi na ihe ha chere bụ mmụọ. Nke a kpatara ọgba aghara n'ime obere obodo, a kpọkwara ndị agbata obi ka ha bịa hụ ihe ahụ. N'ime akwụkwọ ebubo nke a na - egosi na mmalite nke akụkọ ndekọ Leah, Njikọ Na-adịghị n'Aka nke Ime Mmụọ Ime Oge, nne umuaka, Oriaku Fox dere, sị:
Nwa m nke ọdụdụ (Cathie) kwuru, sị: “Maazị. Splitfoot, mee ka m mee, ”na-akụ aka ya. Da ahụ na-eso ya ozugbo site na otu nọmba raps; mgbe ọ kwụsịrị ụda kwụsịrị obere oge. Margaretta kwuziri n'egwuregwu, sị: “Ugbu a, mee nnọọ dị ka m na-eme; gụọ otu, abụọ, atọ, anọ, ”na-akụ otu aka megide ibe ya n’otu oge, na raps bịara dị ka ọ dị na mbụ. Ọ tụrụ egwu ịmeghachi ha. Mgbe ahụ Cathie ji ịdị mfe nwata ya kwuo, sị: “nne, ama m ihe ọ bụ; echi bụ ụbọchị nzuzu nke Eprel, ọ bụkwa mmadụ na-achọ ịrafu anyị. ” Echere m na m nwere ike ịnwale ule na ọ nweghị onye nọ ebe ahụ nwere ike ịza. Ajụrụ m mkpọtụ ahụ ka ọ dọọ ụmụ afọ m dị iche iche, na-aga nke ọma. Ozugbo enyere afọ ọ bụla nke ụmụ m n'ụzọ ziri ezi, na-akwụsịtụ n'etiti ha ogologo oge iji wee kọwaa ha nke asaa wee mee ka oge nke asaa kwụsịtụrụ ma nyekwa raps atọ siri ike ọzọ, nke kwekọrọ na afọ nwata ahụ nwụrụ anwụ, nke bụ nwa ikpeazụ m. M wee jụọ, sị: “Onye a ọ̀ bụ mmadụ nke na-aza ajụjụ m n’ụzọ ziri ezi?” Enweghị mgbapụ. Ajụrụ m: “Ọ bụ mmụọ? Ọ bụrụ na ọ bụ, mee raps abụọ? ” E nyere ụda abụọ ozugbo a rịọrọ arịrịọ ahụ ”(Underhill 1885: 7).
Mgbe ndi oru agbata obi nyochachara ya, emesiri kwubie na umuaka ndi ozo n'eme ka onye onye na-aga agha bia, onye onye ozo nke ulo ha gburu ma lie n'ime ala. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na akụkọ ọdịnala Leah na-ekwu na a chọtawo ụmụ mmadụ na ala nke ụlọ Hydesville, Harry Houdini si Onye Na-eme Anwansi Na Otu Mmụọ ekwu na Maggie mesịrị kwuo na ọ dịghị ihe dị otú ahụ a chọtara, nke ahụ, nke sitere n'aka akụkọ ndị ahụ, ndị agbata obi ahụ kwụsịrị ịchọta ihe gbasara igbu ọchụ (1924: 7). Ka ozi nke mgbasa ozi nke ụmụ agbọghọ na-agbasa, ọtụtụ ndị bịara abịa na-ahụ ihe ndị dị na ha. N'ikpeazụ, "nchọtaghachi mmụọ" na-etolite na Kate na Maggie na-ezite ha ka ha nọrọ na Amy na Isaac Post na Rochester nso, New York. Ozi ndị a bụ ndị a ma ama na ndị njakịrị na Quakers. Mgbe obere oge na-aga n'ihu na Posts, Kate na Maggie na nwanne ha nwanyị tọrọ (na Leah Fox Fish), onye bi na Rochester. Lia, otu nne, dị ihe karịrị afọ iri karịa ụmụnne ya, mgbe ọ ghọtara na ya onwe ya nwekwara ike iji mmụọ ya kwurịta okwu, o kpebiri na ụmụnna nwanyị kwesịrị inye ngosi ọha na eze nke ike ha dị omimi. . Na 1849, ụmụnna nwanyị Fox wepụtara ngosi mbụ ha n'ihu ọha na Ụlọ Mgbakọ nke Rochester nke dị na nhazi nke odeakụkọ bụ Eliab Capron. Ụmụ nwanyị ahụ na - akpọkarị "ndị na - agba afa," nke bụ, ndị na - ajụ ajụ na mmụọ na - agwa ndị mmụọ okwu site na ịkụ aka na ụdọ ndị kwekọrọ na mkpụrụ akwụkwọ mkpụrụedemede. Ụmụ agbọghọ atọ ahụ malitere inye ngosi na steeti New York, na-emecha gaa New England na n'ebe ndịda Ontario.
N'oge ahụ, a na-atụ anya ka ndị inyom nọrọ n'ụlọ ma nwee nkụda mmụọ n'ikwu okwu n'ihu ọha ma ọ bụ ịrụ ọrụ. N'akwụkwọ akụkọ ya, Lia Fox Underhill nwara ime mkpesa maka ọdịdị ihu ọha ya site n'ikwu na ya na ụmụnne ya nwanyị achọghị n'ezie ịga ma ọ bụ inye ngosi ọha ọha, ma na "ndị enyi" ha ndị ọzọ nọgidere na-ekwusi ike, na-eme mkpọtụ ma na-emegbu onwe ha ha ruo mgbe ha gbanwere ma kwenye na ha ga - eme ihe ndị mmụọ (bidoro (Underhill 1885: 120). N'ihe banyere ihe ndị a machibidoro anya n'ihu ụmụ nwanyị, ọ dịkwa mma ịkọwa na na ngosipụta ọha mmadụ mbụ ha (na n'ezie na ngosipụta dị ukwuu ha nyere) Fox Sisters anaghị ekwu okwu mgbe ha na-agba. Naanị ha mere ọrụ ha dị ka ndị na-eme nchọpụta mgbe Eliab Capron, bụ onye na-arụ ọrụ dị ka onye nlekọta ha, kpọbatara ha, kwadoro maka eziokwu ha, ma duzie ndị na-ege ntị site n'usoro ihe omume ahụ. Ka o sina dị, a katọrọ ụmụnna nwanyị ndị a, oge a ka ha na-akwụ ụgwọ ụgwọ maka ịbanye na ngosipụta ha. Capron dere, sị:
Eziokwu na ha na-akwụ ụgwọ maka oge ha a na-ejikarị arụmụka iji gosipụta na ihe a nile bụ naanị ihe na-akpata ego na dị ka mbụ facie ihe akaebe nke wayo. Ihe kpatara nkwusa nke mmụọ ime mmụọ a ga-eji nọrọ n'ụdị nkwupụta dị otu a karịa ka ozi ọma ọ bụla adịghị edocha anya, belụsọ na ịkwụ ụgwọ otu ụdị ndị nkwusa bụ omenala ochie na ndị na-eme ihe kwekọrọ na ya anaghị enwe obi njikere kweta klas ọhụrụ nke ndị asọmpi n'ọhịa (Capron 1855: 82).
Dika umuaka na-etolite karia, dika ndi nwanyi ndi ozo (na ndi ozo) gbasoro ihe nlereanya ha, ikike ha puru ime ka ndi oru nyocha, ndi choro imata "ezi" nke ihe omimi di egwu ma na-eti aka. Na 1851, Austin Flint, Charles E. Lee, na CB Coventry, ndị dọkịta atọ si Buffalo, New York, nyochaa ụmụnna nwanyị ma bipụtara otu isiokwu na akwụkwọ akụkọ ndị dị na mpaghara na-ekwu na ụmụnna nwanyị na-eme ka ha mara ụbụrụ ha site n'icheta njikọ ha. N'akwụkwọ akụkọ banyere ya, Leah Fox Underhill kọwara nyocha a dị ka ahụmahụ dị egwu. Ndị dọkịta ebu ụzọ rịọ ka Fox Sisters dọrọ n'ihu "kọmitii nke ndị inyom" iji hụ na ha anaghị ezo ihe ọ bụla n'uwe ha nke nwere ike ịme ụda (Underhill 1885: 365). Ọzọ, "ndị dọkịta na-azụ anụ" jidere ụkwụ ụmụnne nwanyị mgbe ha na-eme ya, ọzọ iji gbanahụ ha n'ịghọ aghụghọ ule. Na 1853, ndị otu nwanna nwanyị na-enyocha ihe nchọpụta aha ya bụ Charles Grafton Page, bụ ndị natara otu nkwubi okwu ahụ dị ka "ndị dọkịta Buffalo." Ma ndị Buffalo Doctors na Charles Grafton Page kpebiri na Fox Sisters bụ ndị aghụghọ bụ ndị na-esi n'ụzọ ụfọdụ gbapụ na-emepụta ihe ndị ahụ ma kụọ onwe ha.
N'ihe gbasara 1853, ụmụnne nwanyị atọ niile biri na New York City. N'ebe ahụ, na 1858, Lia Fox Fish lụrụ otu onye mmụọ nsọ nke bara ọgaranya aha ya bụ Daniel Underhill, ma kwaga Brooklyn ebe ọ na-enwe nnọkọ onwe ya n'ụlọ ya. Ndị ahịa Lia nwere nkwanye ùgwù, gụnyere ndị ọkachamara a ma ama, dị ka Horace Greeley, na ndị edemede, dị ka James Fenimore Cooper. N'ụzọ dị mwute, Kate na Maggie adịghị mma. Dị ka nna ha, ụmụ agbọghọ abụọ ahụ na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, na-aṅụbiga mmanya ókè. Maggie malitere mmekọrịta ya na otu onye na-eme nchọpụta nke Arctic nke aha ya bụ Elisha Kent Kane bụ onye depụtara ọrụ Maggie dị ka onye na-ajụ ya, ma kwụghachi ya ugboro ugboro ịlụ ya n'ihi na ndị mụrụ ya anabataghị ya. Mgbe Kane nwụrụ mgbe ọ na-eme njem, Maggie dara mbà, ma gbanwee ugboro ugboro na karama ahụ. Mgbe Kane nwụsịrị, Maggie kpọrọ aha Kane, na-azọrọ na ha abụọ lụrụ na nzuzo na 1856 (Abbott 2012: np).
Na 1871, Kate gara England, bụ ebe ọ zutere ma lụọ HD Jencken, onye ọkàikpe. Na England, Kate mụrụ nwa nwoke abụọ. N'ụzọ dị mwute, mgbe ụmụ ya ka bụ nwata, nna ha nwụrụ. Kate laghachiri na New York na ụmụ nwoke abụọ ahụ ebe ọ na-enye ọrụ ya dị ka onye na-ajụ na nzuzo. Otú ọ dị, ịda mbà n'obi na nrụgide na-arịwanye elu iji nye ụmụ ya, Kate na-eso ụzọ Maggie n'ime mmanya. Na New York, ma Kate na Maggie gafere oge ebe ha si na nwanne ha nwanyị bụ Leah pụọ, ọ bụ ezie na (dịka Lia) ha na-achọkarị nkwado ego, nke ya na di ya nyere. Na 1884, Maggie, a kpọrọ ya "Oriaku. Kane, "bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ nke Seybert Commission nwalere, otu kọmitii nke ndị ụkọchukwu University nke Pennsylvania na-ejikọta nchọpụta na-eme nchọpụta. Dị ka ọrụ ahụ si kwuo, ihe ndị a rụpụtara adịghị njọ. Oriaku Kane enweghi ike ime ihe obula (Seybert Commission 1887: 35).
Na 1888, Kate na Maggie raara nwanne ha nwanyị tọrọ ya ụra site n'ikwu n'ihu ọha na ihe ngosi ha nke ike ime ihe na-adighi ike, nakwa na ha kere ihe omimi di egwu site na ijikota nkwonkwo ha. N'akwụkwọ nke aha ya Ọnwụ Ọkụ Na-akpata Ime Mmụọ, Odeakụkọ na-enyocha ihe nyocha bụ Reuben Briggs Davenport kwuru na nkwupụta nkwenye na Kate na Maggie bụ njedebe nke ime mmụọ ahụ dị ka ọ na-egosi na ndị na-ajụ ọhaneze dị ka aghụghọ (Davenport 1885: 76). N'aka nke ọzọ, Leah nọgidere na-esi ọnwụ na ihe ndị ahụ dị ịtụnanya. Ma, ọ bụ ezie na Kate na Maggie nabataghachi nkwupụta ha n'afọ na-esote, nkwenye nke ụmụnne nwanyị na nke ime mmụọ ahụ na-emebi emebi. Lia nwụrụ na 1890, mgbe Kate na Maggie nwụrụ dị ka ndị ogbenye naanị afọ ole na ole ka e mesịrị.
Ụmụ nwanyị Fox anaghị ejikọta ozizi ụfọdụ na ozizi ime mmụọ ruo mgbe ha (na ikike ha) na-ekwu okwu nke mmụọ ime mmụọ nke sitere na ọrụ Andrew Jackson Davis (1826-1910). Ozugbo ụmụ nwanyị na-akụ azụ na ndị na-akụ aka jikọtara na nkwurịta okwu na ndị nwụrụ anwụ, ndị mmụọ-ụka kwusiri ike na ikike nke ndị inyom bụ ihe àmà nke ndụ karịrị ili. Ya mere, Ụmụ nwanyị Fox, site na ọrụ ha, ghọrọ de facto Ndị ime mmụọ. Nte ededi, Leah, akpan akpan, ama ọdọhọ ke enye ama ọsọn̄ọ ada ye mme ukpepn̄kpọ Spiritist, owụt mme n̄kpọ emi ẹkenamde ke ini ini emi ẹkewụtde "edinam owo ke idem, mmê ke esịtidem, ke enye ama akakpa nke inwe ọganihu ma na-enwe ọganihu, n'adịghị agbanwe àgwà na njirimara; ma ọ bụ n'okwu ndị ọzọ, na anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi. . . nke bu isi nkuku nke okpukpere chi niile na nke Okpukpe niile "(Underhill 1885: 34).
Nye ndị gụrụ akwụkwọ na narị afọ nke iri abụọ na narị afọ, nzaghachi ihu ọha nke Fox Sisters na-ekwu na ha na ndị mmụọ na-akparịta ụka nwere ike iyi ihe ijuanya, ma oge na ebe ha bi na-enye ihe gbara ọkpụrụkpụ maka ihe mere eji kwuo okwu ha. Ezinụlọ Fox biri n'otu akụkụ New York nke dị n'ebe ugwu na, na narị afọ nke iri na itoolu, bụ ebe a maara nke ọma maka mmegharị okpukpe ọhụrụ. A maara mpaghara a dị ka "Burned Over District" n'ihi na a na-ejikarị ọkụ ọkụ na-efe ya. Ya mere, gburugburu ebe Fox Sisters hụrụ ama, bụ otu n'ime ọtụtụ okpukpe ọhụrụ (tinyere Mormonism) nke na-eto eto.
Ememe bụ isi (Lee kwa, Womenmụ nwanyị nọ na narị afọ nke iri na itoolu nke ime mmụọ nke America) metụtara Mmụọ Nsọ bụ nnọkọ ahụ, [Foto dị n'aka nri] ọ bụ ezie na Fox Sisters na-ebu ụzọ depụta akwụkwọ ozi ha na ndị mmụọ na-ekwu na ha bụ "ngosipụta;" ya bu, ikwuputa ihe umuaka ndi nwanyi n’egosiputa dika “ihe ngosi” nke enyere otutu igwe mmadu. Womenmụ nwanyị ahụ arụghị ọrụ a ghọtara nke ọma dị ka onye na-ajụ ajụ n'ime mmekọrịta chiri anya nke nnọkọ ahụ ruo mgbe emesịrị na ọrụ ha. Nke ahụ bụ, mgbe ụmụnne nwanyị ahụ kwụsịrị ịgagharị ma biri na New York, ọrụ ha na ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ obere ìgwè mmadụ nwere ike ịkọwa dị ka nnọkọ karịa ngosipụta. Mgbe ha na-agagharị, ụmụnna nwanyị gosipụtara ngosipụta n'ihu ọtụtụ narị mmadụ ma nne ha ma ọ bụ onye njikwa nwoke na-elekọta ha. N'ụzọ dị iche, na obere nnọkọ ha mere n'ụlọ ndị mmadụ, a ghọtara ụmụnne nwanyị ndị a ịbụ ndị isi ime mmụọ na ndị na-akọrọ izu karịa karịa ndị na-eme ngosi ma ọ bụ "ndị ngagharị iwe."
Enweghi ike ile ndi nkuzi Fox anya ndi isi nke ndi ndu ime mmuo, ma ha na-ele ya anya na omumu ya. Ọ bụ ezie na Kate na Maggie n'oge dị iche iche jụrụ echiche nke ịbụ onye na-ajụ ma ọ bụ na-eme dị ka ndị na-agba afa,
nwanne ha nwanyị bụ Lia yiri ka ọ nakweere ọrụ ahụ. N'akụkọ ọdịyo ya, Njikọ Na-adịghị n'Aka nke Ime Mmụọ Ime Oge, [Foto dị n'aka nri] Leah Fox Fish Underhill na-akọwa onwe ya dị ka onye nọ n'ọgbaghara nke usoro ahụ, na-ekwupụta, "ọ dịghị onye ọzọ nwere - ma na ncheta nke ọma na ụlọ ahịa nke ihe ederede - ihe na data dị mkpa maka ọrụ ahụ nke inye nkọwa ziri ezi banyere mmalite nke usoro a maara dị ka Modern Spiritualism ”(Underhill 1885: 29).
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Spiritualists na-edeba aha na Iso Ụzọ Kraịst na ha omume, Spiritualism ka na-ekwukarị na ọtụtụ ndị Kraịst obodo. Dịka ọmụmaatụ, Lia kọwara otú onye nkụzi si kọọrọ mama ya, bụ Mrs. Fox, onye dụrụ ya aka maka ọrụ ụmụ ya nwanyị na-eme. N'ịgwa Oriaku Fox okwu mgbe ọ gasịrị ụka, onye nkwusa ahụ kọwara:
"Ọfọn, Oriaku Fox, enwere mkpesa megide gị maka ịkọ ụmụ gị na-eme ajọ aghụghọ. A na-agwakọta ya ime ọtụtụ nsogbu, ọ na-emegidekwa okpukpe nke Akwụkwọ Nsọ. "Ọ gbara ya ume ime nkwupụta ya n'ihu ụka ma mee ka ụmụ ya kwụsị ọrụ ha na-adịghị mma, ọ ga-enwe ike ịnọgide na-eguzosi ike na ụka. Nwoke a bu onye na-ekwusa ozi oma, ma anyi choro na o were onwe ya ime oru Onyenwe anyi, n'uzo ya, dika anyi nuru site na ya; ma ana m enwe obi abụọ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla zitere ya (Underhill 1885: 231).
Nke a abụghị ihe dịpụrụ adịpụ. Ụmụnna nwanyị ahụ nwere nnukwu mmegide na iyi egwu na njem ha, nke Lia kọwaara ya ogologo oge na akụkọ ọdịnala ya. Oge ndị dị otú ahụ gụnyere ndị ọbịa na-achọghị na ndị na-achọghị ịma, na-ekwu okwu rụrụ arụ site na ụmụ nwoke na nhụwa ha, na-anwa ime nsị, na n'ikpeazụ, ịpụ apụ (na-elekwasị anya n'ụlọ ebe ụmụnne nwanyị nọ). Lia kwuru na ọ ga-anapụta Maggie n'ụlọ:
Achọpụtara m na Maggie na-arịa ọrịa, ọ fọrọ nke nta ka ụjọ jide ya. E nwere ndị agha siri ike maka nchebe n'akụkụ anyị. Anyị anọghị n'ime ụlọ nkeji iri mgbe a chụpụrụ ọtụtụ ntụtụ ma tụfuo, na-agbasa ihe niile n'ụzọ ha. Anyị na-agbada n'okpuru arịa ma dina n'elu ala iji gbanahụ bọmbụ ahụ, na-atụ anya mgbe ọ bụla na égbè ma ọ bụ nkume ga-egbu anyị. (Ụlọ anyị na-ezo n'ime ime ụlọ ahụ.) Ìgwè mmadụ ahụ nọ na-eyi egwu ma mee ihe nile ha nwere ike imebi anyị; ma ebe ha maara ndị nwe obodo nọ na njikere maka ha, ha lara ezumike nká maka abalị ahụ. . . . Obere akwara Maggie siri ike (Underhill 1885: 296).
N'ihi ya, mmeghachi omume na-adịghị mma maka ụmụnne nwanyị ahụ mere ka nsogbu ahụ ghara ịbụ ihe jọgburu onwe ya na mgbasa ozi, gaa n'obodo ndị mmadụ gosipụtara n'ụzọ doro anya na ha chọrọ igbu ha n'ihi nkwulu ha kwuluru. Ka o sina dị, Lia kwupụtara na n'ikpeazụ, ọ bụ àjà kwesịrị ekwesị (Underhill 1885: 168). Mana ebe akụkọ akụkọ Leah dị ka ọ na-egosi na o nwere ezi obi banyere nkwenkwe ya na Spiritualism na ụgwọ ọrụ ọ wetaara ya, ụmụnne ya ndị nwanyị abụọ tọrọ dị ka ndị ambivalent, na-ebu ụzọ kwuo na ha bụ aghụghọ, ma na-ekwu na ha enweela nrụgide na nnabata a. Ọ bụ ezie na o doro anya na Lia kwenyesiri ike na nkwukọrịta ya na mmụọ mmụọ bụ ezigbo, nkwupụta "nkwupụta" nke Kate na Maggie na 1888 na-egosi na ha nwere obi abụọ banyere ụkpụrụ omume nke ọrụ ha rụrụ dị ka ndị mmụọ.
Image # 1: Smụ nwanyị Fox Sista.
Image #2: Ụmụ nwanyị atọ nke Fox. Site n'ikike nke Wikimedia Commons.
Foto # 3: Ihu mkpuchi nke Reuben Briggs Davenport's Ọnwụ Ọkụ nke Ime Mmụọ.
Image #4: Ihe atụ banyere oge ị na-ele anya na narị afọ nke iri na itoolu.
Foto # 5: Ihe mkpuchi nke Leah Fox Fish Underhill Njikọ na-efu na Spiritualism.
Abbott, Karen. 2012. "Ụmụ nwanyị Fox na Rap na Spiritualism." Smithsonian.com, October 30. Nweta site na https://www.smithsonianmag.com/history/the-fox-sisters-and-the-rap-on-spiritualism-99663697/ na 17 May 2018.
Capron, Eliab. 1885. Ihe Nkụzi nke Oge A: Eziokwu ya na Ụdị Ebumnuche Ya, Mgbanwe na Nkwepụta Ya. Boston: Bela Marsh Press.
Davenport, Reuben Briggs. 1888. Ọnwụ-Ọkụ na Ime Mmụọ: Ịbụ Ezi Akụkọ nke Ụmụnna nwanyị Fox, Dị ka Onye Nlereanya nke Margaret Fox Kane na Catherine Fox Jencken. New York: GW Dillingham.
Houdini, Harry. 1924. Onye Na-eme Anwansi Na Otu Mmụọ. Cambridge: Ụlọ ọrụ University Press Cambridge.
Ndi Masicotte, Claudie. 2017. Ndị na-ekwu okwu nke ọma: Ịlụ nwanyị na Onye Nlekọta na Ahụhụ Mmụọ, 1850-1930. Montreal na Kingston .: McGill-Queens University Press.
Peeji, Charles Grafton. 1853. Ebumnuche: Mkparịta ụka nke Mmụọ na Ntụpụta Isiokwu. New York: D. Appleton na Ụlọ ọrụ.
N'okpuru ala, A. Leah. 1885. Njikọ Na-adịghị n'Aka nke Ime Mmụọ Ime Oge. New York: Thomas R. Knox & Co.